Ulenza njani iTshaneli yoThengiso lwakho loThengiso lweNkcitho kwiZibonelelo ze-Ecommerce | Martech Zone
I-ecommerce ibe yinto ekhulayo kule minyaka ilishumi idlulileyo. Kwaye ngobhubhane, abantu abaninzi bathenga kwi-Intanethi kunanini na ngaphambili. I-ecommerce ibonelela ngendlela efanelekileyo yokufikelela kubalo kwihlabathi liphela ukusuka ngasemva kwikhompyuter. Apha ngezantsi, siza kujonga ukubaluleka kwe- uguqulo lwentengiso iinkonzo kunye nendlela yokuzisebenzisa ukukhulisa intengiso yakho yeCommerce.
Kutheni ihlawula ukuSebenzisa ukuGuqulwa kweNtengiso yoBuchule kwisiCwangciso sakho seNtengiso seLizwe
Sebenzisa inkonzo yokuguqula ukuthengisa kwimisebenzi yakho ye-eCommerce kunokufumana umvuzo omkhulu. U-Ofer Tirosh, u-CEO weenkonzo zolwimi uTomedes, unika cebiso malunga nokufumana inkampani yobungcali kunye nokwakha eyakho Isicwangciso sentengiso samanye amazwe Ukuze wandise:
Ukuba awuthethi ulwimi lweli kuthethwa ngalo, fumana iarhente efanelekileyo ukuba usebenze nayo- kwaye uyenze ngokukhawuleza! Ukubandakanya iarhente kwintengiso yakho yamanye amazwe kwasekuqaleni kunokwenza umahluko omkhulu kwithuba lakho lokuphumelela. Nokuba uphanda amasiko asekuhlaleni, ukhangela ulwazi malunga neendlela zokuthengisa ozikhethileyo kwintengiso yakho ojolise kuyo, okanye unikezela ngolwazi malunga nemveliso yakho, ukuba nomntu okwaziyo ukuthetha ulwimi ngokutyibilikayo kubalulekile. Umguquli olungileyo okwazi ukuphatha yonke into ukusuka kulwazi lokuthengisa ukuya kwiinkonzo zokuguqulela iwebhusayithi unokukhawuleza abe yinxalenye exabisekileyo yakho Isicwangciso sentengiso samanye amazwe.
U-Ofer Tirosh, u-CEO weTomedes
I-ecommerce ngokuqinisekileyo iyaqhuma kulo nyaka, nabantu abanyanzelweyo ukuba bathenge kwi-Intanethi ngelixa iivenkile zisondele okanye zinyanzelisa ukudideka ekuhlaleni. Kwi-Q2 2020, ukuthengiswa kwe-eCommerce e-US, umzekelo, zanyuka ukuya kwi-16.1%, ukusuka kwi-11.8% kwi-Q1.
Funda ukuze ufunde indlela yokusebenzisa uguqulo lwentengiso ukunceda ukukhulisa ishishini lakho le-eCommerce.
Uyithengisa njani indawo yakho ye-Ecommerce usebenzisa ukuThengisa ukuThengisa
Inguqulelo yentengiso igubungela uninzi lweentengiso zedijithali ezinokukunceda ukuba udlulise igama uye kubalo lwabantu malunga newebhusayithi yakho ye-eCommerce. Ngokusebenzisa uguqulo lwentengiso, unokuqinisekisa ukuba le mizamo ilandelayo yentengiso yedijithali ifanela abantu kwindawo yakho ye-eCommerce. Yiyiphi eminye yemizekelo yokuguqulela? Ngokukodwa kwimeko yedijithali, zibandakanya:
Izithuba zosasazo zasekuhlaleni
Iintengiso zedijithali, kubandakanya ukubonisa iintengiso kunye neentengiso zemidiya yoluntu
Ukudibana nezithuba zentengiso
Inguqulelo yentengiso inokukunceda ekuguquleleni izinto zentengiso kwintengiso yesiko ukuba le nto yinkampani yakho ibona kufanelekile ukuba ityale imali njengawe gxila kwisicwangciso sentengiso imizamo. Inguqulelo yentengiso iyakwazi ukuphatha iintengiso zemveli, iincwadana, iileta zentengiso, iiflaya, iikhathalogu kunye nokunye.
Ukuthengisa umxholo yenye indlela yokuhambisa ifayile yakho uguqulo lwentengiso chitha kwi-eCommerce boom. Ayikhuthazi ngokuthe ngqo imveliso ethile okanye inkonzo. Endaweni yoko ivelisa umxholo onolwazi okanye owonwabisayo kubantu abafanelekileyo. Umzekelo, indawo yokugcina i-eCommerce Ivenkile inokuvelisa iposti yebhlog malunga neendlela ezilungileyo zokuqeqesha injana entsha.
Ukuthengisa umxholo kubangela ukuba abantu babandakanyeke kwibrendi kwaye bathethe nabathengi abanokubakho ngendlela eluncedo kubo. Ukuthengisa ngokwesiko kufuna ukuba abantu bathenge, nto leyo icinywayo kuninzi lwabasebenzisi be-intanethi banamhlanje. Ukuthengisa umxholo kunokuba yinxalenye eqinileyo yayo nayiphi na Isicwangciso sentengiso samanye amazwe.
Ukuba ukhetha ukuhamba nentengiso yomxholo, iinkonzo zokuguqulela zinokuqinisekisa ukuba umxholo wakho oluncedo kunye nokonwabisa ugcina imiyalezo yawo engundoqo kwaye uhambelana nolwimi kunye nenkcubeko entsha.
Inguqulelo yokuThengisa kunye neSiza sakho se-Ecommerce
Inguqulelo yentengiso inokukunceda nakwindawo yakho ye-eCommerce uqobo. Ukuqinisekisa ukuba indawo yakho iguqulelwe kwayeIndawo ibiyinxalenye ebalulekileyo ye Isicwangciso seshishini samanye amazwe. Yintoni uguqulo jikelele? Inguqulelo iqinisekisa ukuba isicatshulwa ngokwaso sifundeka kakuhle kulwimi olutsha. Nangona kunjalo, ukwenziwa kwasendaweni kubaluleke kakhulu kwifayile ye- Amava eCommerce. Indawo yangaphakathi inakho:
Hlaziya zonke iisimboli kunye nokufomatha kwiwebhusayithi, njengophawu lwemali, iifomathi zedilesi, kunye neenombolo zefowuni
Qiniseka ukuba uyilo luhambelana nokulindelwe ngumthengi walapha kunye nolwimi olutsha
Hlaziya imizobo enjengeefoto ukuze utshatise iindibano zenkcubeko yasekuhlaleni
Nceda indawo ye-eCommerce ukuba ithelekise imigaqo yengingqi enjengemithetho yabucala okanye izaziso zecookie
Gcina umxholo kwiwebhusayithi uqobo ubuthathaka ngokwenkcubeko
Entle uguqulo lwentengiso Inkonzo inokusingatha ukuguqulelwa, ukubekwa ekhaya, kunye nokudlula. Ingabonisa ukukhuphela kunye nokuguqulela kwenziwa lula umxholo wevidiyo kwaye unokuqinisekisa ukuba yonke ikopi ihambelana nezinto ezilindelwe ngabantu ekujoliswe kubo.
Zonke ezi nkcukacha zidibanisa ukwenza iwebhusayithi ekhangeleka ngobuchule eCommerce. Kuqhelekile ukuba ufumane indawo ye-eCommerce eguqulelwe kakubi okanye isenayo iisimboli zemali kwifomathi yangaphandle. Ezo zinto zincinci ziyenza nzima iwebhusayithi ukuba ikusebenzise kwaye ikwenze uzibuze ukuba ukhubekile na kwindawo yokukhwabanisa. Qiniseka ukuba Amava kubathengi be-eCommerce yinto elungileyo kubathengi bakho ngokwenziwa kwewebhusayithi. Ubeko lwasekhaya yinxalenye ebalulekileyo yezona zilungileyo izicwangciso zentengiso zamanye amazwe.
Ungazifumana njani iiNkonzo zeNtengiso eziThengiswayo
Qiniseka ngokuthenga phakathi kweearhente ezahlukileyo zokuguqulela. Ungabafumana ngokubuza ngeenxa zonke kwinethiwekhi yakho okanye ukhangele kwi-Intanethi.
Unokufumana iinkonzo zalapha ekhaya ngokusebenzisa amagama afana neenkonzo zokuguqulela ezikufuphi nam, iinkonzo zoguqulo lobungcali zase-UK okanye iarhente yokuguqulela yaseLondon. Unokujonga kwakhona inkonzo ngolwimi olifunayo, usebenzisa amagama anje uguqulo lwentengiso ngeSpanish, uguqulo lwentengiso ngesiTshayina, okanye uguqulo lwentengiso ngesiFrentshi.
Qiniseka ukuba ulungiselela uluhlu lwemibuzo kwinkonzo nganye. Uphendula njani lo mibuzo uza kukuxelela ukuba banolwazi kangakanani kwaye banobuntu kangakanani ekunxibelelaneni nabo. Ungabuza malunga namaxabiso, ukuba bahlala kanjani bezilungiselele ukuhlala kumhla obekiweyo, zithini iziqinisekiso zabo zoguquleli, kunye namava abo uguqulo lwentengiso na.
tags: Ukuguqulelwa kwe-ecommerceurhwebo lwamanye amazweurhwebo lwamazwe ngamazwekumazwe ngamazweuguqulo lwentengisoezininzi ngeelwimiutywalaukubhaliselwaUguqulelo olukhutshelweyotranslationiinkonzo zoguqulo